Shwe Yoe – Daily News For You
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကိတ်ဆုံးနဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှဆုံး မင်းသမီး (၁၀) ဦး …….ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဒီတစ်ခါတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကိတ်ဆုံး ကောက်ကြောင်း အလှတွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့
…….ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဒီတစ်ခါတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကိတ်ဆုံး ကောက်ကြောင်း အလှတွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မြန်မာ့အကိတ်ဆုံးနဲ့ နာမည်ကြီး Cele (၁၀) ဦးရဲ့ စာရင်းကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်…. ၁၀။မျက်ဝန်း ပရိတ်သတ်ကြီးကို မျေက်ဝန်းနဲ့ကတော့ အထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူးနော်။မျက်ဝန်းကတော့ စွဲမက်ဖွယ်ရာအလှတရားစစ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေးဖြစ်သလို ပုရိသတွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကိုလည်းရရှိထားပါတယ်နော်။အလှူအတန်းတွေကိုလည်း ရက်ရောသူတစ်ဦးဖြစ်လို့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်နော်… ၉။မေပန်းချီ
အဆိုတော် ရေမွန် ကတော့ လူကြီး၊ လူငယ် ၊လူလတ်ပိုင်း အားလုံး ကြိုက် နှစ်သက် အားပေးရတဲ့ အဆိုတော် တယောက်ပါ။ အောင်မြင်မှုတွေ ရှိနေတဲ့ အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ အောင်မြင်မှုကို ကြာရှည် မခံစားလိုက်ရဘဲ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ(၂၃)ရက်နေ့က ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဘဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ အရွယ်မတိုင်ခင်ကြွေလွှင့်ခဲ့ပေမယ့် အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာ ရေမွန်ကို အမှတ်ရ
. အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ ဂီတလမ်းခရီးကို လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ သူကတော့ အဆိုတော် ပိုးမီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုးမီဟာ Myanmar Idol အဆိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကို ရရှိထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမထွက်ရှိခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေကလည်း အကောင်းဆုံးဖန်တီးထားတာကြောင့် လူငယ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ လတ်တလောမှာလည်း သူဝါသနာပါရာ ဂီတတွေကို ဖန်တီးကြိုးစားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ Project K အဖွဲ့လေးကတော့ အမိုက်စား ကကွက်တွေနဲ့ နှာခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲအားပေးမှုကိုရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အဖွဲ့ဝင်တွေ နဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေဆီကနေ project k အဖွဲ့ဝင် Morris က လိမ်သွားကြောင်း ချမ်းမြေ့ဦးကပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်။Projects K အဖွဲ့ဝင်ချမ်းမြေ့ဦးကဘယ်သူထင်မှာလဲကိုယ့်သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးတစ်ယောက်က ဒီလိုမျိုးလိမ်ပြီးထွက်ပြေးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကို၊ထိုင်းကိုရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မိဘဆီကနေလဲ လက်ဖြန့်မတောင်းချင်လို့ ကျွန်တော့်ကားလေးရောင်းပြီး ကျွန်တော့်ဟာ ကျွန်တော်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အလုပ်လုပ်နေတာပါ ။ တစ်ခုသိစေချင်တာက ကျွန်တော်ငွေတိုးချေးစားသူမဟုတ်ပါဘူး ။
သံစဉ်မောင်ဆို တာနဲ့ပရိသတ်တွေ ချစ်နေရ တဲ့နိုင်ငံ ကျော်တ စ်ယောက်ပါ။ ပရိသတ်အချစ်တော် ဘေဘီမောင် ရဲ့ညီမ လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ညီမနှစ်ယောက် က လည်း အမြဲချစ်ချ စ်ခင်ခင်နဲ့ပျော်ရွှင် စရာကောင်း နေတာပါ။ သူမ ဟာမော်ဒယ် အလုပ် တွေကိုလုပ်နေတာပါ။ ကြော် ငြာပုံရိပ်လေးတွေ video လေးတွေကိုရိုက်ကူးနေရတာပါ။ သူမရဲ့ပုံရိပ်အလှ တွေက လည်းပရိသတ်တွေ
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အလှ မယ်သ င်းသင်းကိုလူတို င်းသိပြီးဖြစ်မှာပါ ၊သူမရဲ့ ရဲ့ရင့်ပြတ် သားမူမိန်းမ ကောင်းပီသမူတို့ ကြောင့်ပရိတ်သ တ်ကြားနံမည် ကြီးပါတယ်။ယနေ့မှာတော့ ပိုက်ဆံမရှိလို့အ နှိမ်ခံအပြောခံနေ ရချိန်မှာ မထင်မှတ် ဘဲလက် ဆောင်အကြီးကြီး ရရှိခဲ့ ကြောင်းအခု လိုပဲပြော ပြလာပါတယ်။ သင်းသင်းဆို အမြဲလိုလို အနှိမ်ခံအပြော ခံရပါတယ်အသို င်းကမရှိ ပိုက်ဆံကမချမ်းသာ
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင်သင်ဇာဝင့်ကျော် ကတော့ မကြာသေးမီက ဘဲ မဂ်လာ အခမ်းအနားတစ်ခုကို ရှမ်းတော်မတော် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ SSPP/SSA ရဲ့ စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီး တတ်ရောက်ခဲ့လို့ ဝေဖန်မှုတစ်ချို့ထွက်ပေါ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ ဟိုက်ပါ ရေတံခွန်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ကျေးသီးမြို့နယ် ဝမ်ဟိုင်းဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် Documentary ရိုက်ကူးဖို့သွားရင် မဂ်လာပွဲတတ်ရောက်ခဲ့တာလို့ လည်း ပြန်ရှင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့
ပရိသတ်ကြီးရေ ပိုးမမှီသာကတော့ရှူ တိုင်းရင်အေး တဲ့ အလှ ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ဆရာဝန် မင်းသမီးချောလေးတစ်လက်ပါ။ သူမ အနေနဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့music videoတွေကနေ တစ်ဆင့် ရုပ်ရှင်​ကားကြီးတွေအထိပါရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေးပါ။ အနုပညာအလုပ်တွေလတ်တလောပြုလုပ်လျက်ရှိ တဲ့ပိုးမမှီသာကတော့ ဒီနေ့မှာ ပြည်သူချစ်မင်းသားချော ပိုင်တံခွန်ရဲ့ ခရုလေးနဲ့ အတူ photoတွေရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ ​ပိုးမမှီသာတစ်ယောက် ကြောက်ကြောက်နဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ရကြောင်းကို”ပိုးမမီ နဲ့ ခရုငယ် …
ချစ်ပရိတ်သတ်မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင်အဖြစ်တဲ့ပရိ တ်သတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှု့ကိုအများအပြားပိုင် ဆိုင်ခဲ့တဲ့သူလေး ခင်ဝင့်ဝါပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ စကားပြောရင် ပွင့်လင်းတတ်သူဖြစ်ပြီးကုသိုလ်ရေးမှာလဲလက်မနှေးဘဲစေတနာသဒ္ဒါးတရားထက်သန်သူလေးပဲဖစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်နေဆဲဖြစ်တဲ့ခင်ဝင့်ဝါကတော့အားလူံးရဲ့အချစိတော်လေးပါပဲ။ ယနေ့လေးမှာတော့ ခင်ဝင့်ဝါကသူ့ကိုမေ့သွားမှာဆိုးလို့ ချစ်စဖွယ်ပုံသစ်လေးတွေကိုပရိတ်သတ်တွေကြားမျှဝေလာပြီး သတိရနေရင်ပြီးရောဆိုပြီးချစ်စ ရာကောငိးတဲ့စကားလေးနဲ့အတူမျှဝေလာခဲ့ပါတယ်နော်။ Credit